आमा भोट पाटीलाई हैन ब्यक्तिलाई दिने हो :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
बिहानै आमाले नेपालबाट फोन गर्नु भएछ।
बिदाको दिन अबेरसम्म पनि निदाउन सक्ने मेरा आँखाहरुलाई आज भने मोबाईलको चिच्याहटले एका बिहानै बिँउझन बाध्या बनायो। आमालाई सनिबार र आईतबार बिदा हुने कुराको जानकारी दिए देखि धेरै ख्याल गर्ने गर्नुभाछ। त्यतिमात्र हैन यहाँको समयलाई पनि कण्ठस्थ गर्नु भाछ। एका बिहानै आमाको अवाज सुन्न पाउँदा यो बिरानो ठाउँ पनि आफ्नै जस्तो लाग्यो। प्रबिधिले कति सजिलै नजिक बनाई दिएकोछ बिस्वलाई। त्यसैले त समुन्द्रको देशबाट पनि त्यो पहाडको कुनामा बसेकी मेरी आमासङ्गै नजिक भएर बोल्न पाएको थेँ। आमाले सन्चो बिसन्चोको खबर साटासाट गरे लगतै स्थानिय चुनाबको कुरा उठाउनु भो। “छोरा भोट कुन पार्टिलाई दिने हो?” आमाको प्रस्नले ज्यादा पिरोल्यो मलाई। किनकी अझै पनि हाम्रो गाँउठाँउमा पार्टिकै मात्र कुरा हुने गरेकोले देख्दा।
नेपाल गाउँ नै गाँउले भरिएको देश। जहाँका 80% भुभाग बिकासबाट टाढा छ्न् तिनै बिकासबाट टाढा भुभागलाई नै गाउँ भनिन्छ। जहाँ पिउने पानी लिनका लागि दुई घण्टाको बाटो हिन्नु पर्छ। जहाँ बालबच्चाहरु किताबसङ्गै भारी बोकेर कोसौँ टाढाको स्कुलमा शिक्षाका लागि जानूपर्छ। अझ कयौँ दुर्गम ठाँउहरुमा त तूईनमा झुन्डेर ज्यानको बाजि राखेर पुग्नु पर्छ स्कुल। अनि पढिन्छ अब्यबहारीक शिक्षा। जुन शिक्षाले साक्षर मात्र गराँउछ। शिक्षित तथा ब्यबहारीक हुनुको कुरा त परै छोडौँ। त्यस्तै गाउँ, मेरो गाउँ पनि, जहाँ सरकारले भन्दा स्थानियले स्वबुद्धि र जनश्रमले बिकास गरेका छ्न्।
नेपालका गाँउहरु जस्तै एक प्रतिनिधि गाउँ।
अरुमा जस्तै विभिन्न पार्टिले आफ्नो बल बुद्धिले जनतामा क्राश भरेर आफ्नो पकड जमाएको ठाउँ। जहाँका निर्धाहरु पसिना बगाँउछ्न् र टाठाबाठाहरु निर्धामाथी अधिकार जमाँउछ्न्। पार्टिकै नाममा निच र घटिया कार्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् कार्यकर्ता उपाधी पाएकाहरु र कहिल्यै सो कुकार्यको दन्ड दिदैन पाटिले पनि। नेपाल भरी हुने जस्तै घृणित कार्य त्यहाँ पनि हुन्छ नै।निर्दोषहरु अपराधी हुन्छ्न् अनि अपराधिहरु निर्दोस। किसानहरु अन्न फलाउँछ्न् अनि भोकै बस्ने पनि तिनै किसानै हुन्छ्न्। कलिला बालिकाहरु बलत्कृत हुन्छ्न् अनि खुलेआम छाती फुलाएर हिन्छ्न् अपराधिहरु र सामाजिक बहिस्कारमा पर्छ्न् तिनै बलत्कृत बालिकाहरु। बिकासका लागि आएका थोरै अनुदान तथा बजेट्बाट घर ठडाँछ्न् टाठाबाठाहरु अनि श्रमदान गर्न लागाएर खनिन्छ्न् बाटाहरु, बनाईन्छन् स्कुलहरु जुन कहिल्यै प्रयोगमा आँउदैनन् किनकी तिनिहरु प्रयोग योग्य नै बन्दैनन्। त्यतिमात्र हैन राजनितिक रुपमा बाँडिन्छ्न् दाजु भाइ अनि पानी बाराबार चल्छ। अनि भन्छ्न् सिद्धान्तमा लागे पछि यो त सामान्य हो। र यी सबै सहन्छ्न् सबैले किनकी त्यहाँ पनि निर्धाहरु सधैँ चुप रहन्छ्न्। चुप रहनु जरुर पनि छ किनकि मेरो गाउँ पनि नेपाल भित्रै पर्छ। नेपालमा यी सबैका लागी छुट छ।
स्थानिय तहको नेतृत्वकर्ता छान्ने अबसर। आफ्नो गाउँ ठाँउको बिकास आफैले गर्ने मौका अनि केन्द्र र सदरमुकाम केन्दृत सुबिधाहरु गाउँ घरसम्म ल्याउने अबसर। यिनै अबिभारा दिनका लागि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने समय। यो चुनाबमा पनि नेपालका सबै पार्टिले उपयुक्त ब्यक्ती उम्मेद्वर बनाएको देखिदैन। हिजो केही गर्न नसकेका ब्यक्तिहरु नै आज पनि उठाएको देखिन्छ। उसो त राजनिती रोजगारका रुपमा लिईरहने ज्याद छ्न् भने त्यसमाथी ज्यादा
खराब मान्छेहरु उम्मेदवार बनाएकाछ्न्। कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ अब? के अझै पनि सकिएको छैन राजनितिक लुछातानी?? कहिले गर्छ्न् त बिकास? हामिभन्दा गरिब देशहरु आज बिस्वकौ धनी देश बनी सके। के अझै हामी ब्यक्तिगत स्वर्थमा नै अल्झी रहने? अनि के गाँउका जान्ने बुझ्नेले पनि राम्रा मन्छेलाई छनोट गर्न सल्लाह दिनु पर्ने ठाँउअ्आ उल्टै मेरी आमालाई जस्तै पाटिलाई दिईनु पर्छ भनेर सिकाउने?? कहिलेसम्म चलाउने यसरी मुलुक??
आमालाई राम्रो सङ्ग सम्झाएँ। “आमा यो चुनाब पहिलाको जस्तो चुनाब हैन। यस पटक पहिलाको जस्तो पाटी छान्ने हैन ब्यक्तिलाई छानेर भोट दिने हो आमा। हामीले जुन जिम्मेवारी दिएर पहिला पाटी छानेर भोट देको पाटिलाई नै दिनु पर्ने हैन आमा। पाटिको आबस्यकता छैन आमा। असल मान्छे छानेर दिने हो त्यो असल मान्छेले हाम्रो स्थानियतहमा बिकास गर्ने छन्।” आमाले बुझेको सँकेत दिनु भो र मैले राम्रा र बिकासप्रेमी ब्यक्तिको नाम दिएँ। सो ब्यक्ती पनि कुनै पाटिबाट उठेको कारण त्यो पाटिको नाम र चुनाब चिन्ह। अनि उसैलाई छान्ने निधो गरेँ।
“तपाईं पनि प्रबासमा हुनुहुन्छ। हामीले भोट दिन नपाए पनि हाम्रा घर परिवारलाई सम्झाँउन सक्छौँ। र राम्रा ब्यक्तिलाई छान्न आग्रह गर्न सक्छौँ। यदि तपाईं कुनै राजनितिक पाटिसङ्ग आबद्ध हुनुहुन्छ भने पनि यो समय तपाईको पाटिलाई हेर्ने हैन तपाईको गाँउलाई बिकास गर्न सक्ने ब्यक्तिलाई छान्न लाउनुस। यदि त्यस्तो असल ब्यक्ती तपाईको पाटिको प्रतिदोन्धी नै भएनी।”
-यामदास घायल ‘सन्तलाल’
स्वतन्त्र रास्ट्रप्रेमी सचेत नेपाली एकता अभियान
प्रकाशित मिति : २०७४ वैशाख २६ (May 09, 2017)